မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 06/01/2008 - 07/01/2008
သူ့အကြောင်းကို ကျမ၁ဝတန်းမအောင်ခင်လောက်ကတည်းက ကြားဖူးနေခဲ့တာကြာပါပြီ.. ကြားလိုက်ရသမျှကလဲ.. သူ့ကောင်းကြောင်း တော်ကြောင်းတွေချည်းပါပဲ..ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆို သူ့ကိုအားလုံးကသိကြတယ်.. ငွေတော့မက်ပုံရတယ်..
ငွေမက်ပေမဲ့သူကသူ့မာနနဲ့သူနော်... သူ့အတွက်အကုန်ခံရကြိုးနက်ရလောက်အောင်ကို တန်ရာတန်ကြေးပြန်ပေးဆပ်တတ်တယ်...ဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်ဘူး..
ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပထမဆုံးဆုံတွေ့ခဲ့ချိန်မှာတော့... ကျမတော်တော်လေးအရှက်ကွဲခဲ့တယ်.. ကျမ၁ဝတန်းစာမေးပွဲဖြေပြီးချိန် သင်တန်းတစ်ခုတက်တော့ သူနဲ့စပြီးတွေ့ခဲ့ရတာလေ...
သူကသူ့အကြော ကောင်းကောင်းမသိရင် တော်တော်ဆက်ဆံရခက်တဲ့သူပဲ...
သူ့ကိုဆက်ဆံရင် သူနားလည်တဲ့ပုံစံတိုင်း အတိအကျပြောရတယ်.. မသေမချာဆိုရင် သူက don't care ပဲ.. စိတ်တိုလို့များ သူ့ကိုထင်ရာတွေ အားလုံးစွတ်ပြီးခိုင်းလိုက်ရင်..ဘာမှမလုပ်ပေးတော့ပဲဒီတိုင်းကို ညိမ်သက်နေတော့တာ..ပြန်မပြောနားမထောင်.. တကယ်ကိုဂွစာ... သင်တန်းမှာလဲ သူကအဓိကနေရာကဖြစ်နေတော့ ကျမမှာနေ့တိုင်း သူနဲ့အခက်တွေ့နေရတော့တာပေ့ါ.. အတန်းထဲကလူတော်တော်များများနဲ့တော့ သူကအဆင်ပြေတယ်.. ကျမနဲ့ဆိုရင်ဘာမှကိုအဆင်မပြေဘူး... ကြာတော့အများနဲ့တစ်ယောက်ဆိုတော့ ကျမကပဲအသုံးမကျသလိုလို ဖြစ်လာတော့တာပေါ့..
သူနဲ့တူတူ ကျမစာလုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင် ကျမဘယ်လောက် ဗျာများနေနေ သူ့ပုံကတော့ဒီတိုင်းပဲ... ရုပ်တည်တယ်ပဲပြောရမလား.. အမှန်တော့သူက စည်းစနစ်ကျနပြီး သူကြိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်း ကျမခိုင်းတတ်ရင် လိုက်လိုက်လျှောလျှောကို လုပ်ပေးတတ်တဲ့သူစားမျိုးပေါ့.. ဘာပဲပြောပြော အဲဒိအချိန်တုံးကတော့ ကျမသူ့ကို မကြည့်ချင်လောက်အောင်ကို မုန်းခဲ့မိတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်နေရာသွားသွား အညံ့စာရင်းမဝင်ခဲ့တဲ့ကျမ... သူနဲ့တွေ့မှလူတွေရီတာခံခဲ့ရလို့လေ...
ဒီလိုနဲ့ ကျမမြန်မာပြည်မှာ သူနဲ့တွေ့ရမယ့် သင်တန်းတွေကို ရှောင်နေခဲ့တယ်.. သူက အတော်လေးတော့နာမည်ကြီးသား.. ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ဂရုမစိုက်ပါဘူး.. အဲဒိသင်တန်းကိုလဲအပြီးထိတတ်ပြီးရော.. နောက်ထပ်သူနဲ့တွေ့မှာဆိုးလို့.. ထပ်မတတ်တော့ဘူး..နောက်တော့ကျမစကာင်္ပူရောက်လာတယ်... အဲဒိမှာသူနဲ့ပြန်တွေ့ပါလေရော.. ထုံးစံအတိုင်း ကျမကလဲ သူ့ဆိုကြည့်မရတော့ သူ့အကြောင်းဆိုရင်ကို စိတ်ဝင်တစားနားထောင်ထားလေ့မရှိဘူးလေ..
ပြဿနာကစပါလေရော.. ကျမသွားလေရာနေရာတိုင်းနဲ့ တတ်ရတဲ့အတန်းတိုင်းလိုလိုမှာ သူနဲ့တူနေတယ်..သူနဲ့မတူတဲ့အတန်းတွေတောင်မှ ပရော့ဂျက်လုပ်ရင်သူ့အကူအညီကိုယူရတယ်.. မြန်မာပြည်မှာတောင် သူနဲ့မပတ်သတ်ပဲနေလို့ရသေးတယ်..စင်္ကာပူရောက်တော့ ကျမဘယ်လိုမှ သူ့ကိုရှောင်လို့မရတော့ဘူး.. ကျမဘယ်လောက်တောင်သူနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်လဲဆိုရင်...ပရောဂျက်အုပ်စုထဲက လူတွေက သူနဲ့သွားတွေ့ရမဲ့ကိစ္စခိုင်းလိုက်တော့.. ကျမမှာ stress တွေဖြစ်ပြီးငိုလိုက်ရတာမပြောနဲ့.. ကျမကသာ သူ့ကိုတဖက်သတ် ကြည့်မရနေတာ. သူကတော့မြန်မာပြည်ကတိုင်းပဲ. မျက်နှာကတသက်မှတ်ထဲပဲ.. သူချထားတဲ့စနစ်အတိုင်းသာလုပ် သူ့ဖက်ကအားလုံးကိုမညီးမညူပြန်လုပ်ပေးတယ်.. အဲလိုစိတ်ထားပြည့်ဝတာလေးကိုတော့ကျမသဘောကျမိတယ်...
"အင်းပေါ့လေ..သူကစည်းကမ်းစနစ်ကြီးတာပါ..ဒါကြောင့်မို့လဲသူထိပ်ရောက်ပြီး လူတိုင်းကသူ့ကိုအားကိုးနေကြတာ.. အမှန်တော့ ငါသူ့အကြောင်းလေးနဲနဲစုံစမ်းပြီး အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းမှ...."
သူ့မှာသူ့လိုပဲတော်တဲ့ဘော်ဒါသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လဲရှိတယ်... သူတို့၂ယောက်ကိုအမြဲတူတူတွေ့ရတတ်တယ်... သူ့သူငယ်ချင်းကကျတော့ဖော်ဖော်ရွေရွေရှိတယ်.. အပေါင်းအသင်းများပြီးသတင်းစုံတယ်... သူ့ကိုကြိုက်တာမေး..သူသိသမျှအကုန်တန်းစီပြောတော့တာပဲ.. မှားတာတွေရော..မှန်တာတွေရော.. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ချင့်ယုံ... သူကတော့ဘယ်ဟာမှားတယ်မှန်တယ်မပြောဘူး... သူသိတာအကုန်ပြောပြရင်သူ့တာဝန်ကျေတဲ့ပုံ...
ကျမကသူ့ထက်...နောက်မှတွေ့တဲ့သူ့သူငယ်ချင်းကိုပိုခင်တယ်...သူ့သူငယ်ချင်းက ကျမစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းတွေမေးတိုင်း..မမောမပန်းပြောပြတတ်တယ်.. ဗဟုသုတပဲဖြစ်ဖြစ်..ရုပ်ရှင်အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်.. ပရောဂျက်အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့...ဒါပေမဲ့.. သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်တိုင်း... သူနဲ့အရင်တွေ့ရတယ်..သူကနေတဆင့်ပဲတွေ့လို့ရတယ်..
အဲ... ကျမ မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့နေ့တွေဆိုရင်တော့ သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရခဲတယ်.. သူ့သူငယ်ချင်းကအပေါင်းအသင်းများတယ်ဆိုပေမဲ့..သူမရှိရင်မရပ်တည်နိုင်ဘူး.. သူ့ကိုတခါတလေတစ်ယောက်ထဲတွေ့ရတတ်ပေမဲ့..သူ့သူငယ်ချင်းကိုတွေ့တိုင်းတော့သူနဲ့အတူတူပဲတွေ့ဖူးတယ်...
သူတို့၂ယောက်လုံးကသူ့ဟာနဲ့သူထူးချွန်ကြတယ်..သူကသူ့ကိုသင်ပေးလိုက်ရင်၁ခါပဲ ချက်ခြင်းတတ်တယ်..ပြီးတော့သူ့ကိုတန်ရာတန်ကြေးပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် အတိအကျပြန်အလုပ်အကျွေးပြုတယ်... သူ့သူငယ်ချင်းကျတော့.. အပေါင်းအသင်းများတဲ့အလျှောက်ဗဟုသုတစုံသလို.. မကောင်းတာတွေလဲသူအကုန်သိတယ်..တခါတလေမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေခေါ်လာပြီး ခပ်အေးအေးနေတဲ့ သူ့ကိုတောင်ဖျက်ဆီးတတ်သေးတယ်.. ကျမနဲ့သူတို့၂ယောက်တဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာပြီး... သူ့သူငယ်ချင်းကတဆင့်..တခြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တယ်... အဲဒိထဲမှာ..အပေါ်ယံသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရသလို.. ကျမအပေါ်တကယ်ခင်မင်တဲ့သူငယ်ချင်း၁ယောက်၂ယောက်လဲရခဲ့တယ်... ကျမအပေါ်လိမ်ညာသစ္စာဖောက်သွားတဲ့..ချစ်သူနဲ့လဲသူကတဆင့်တွေ့ခဲ့တယ်... ဒါပေမဲ့...ကျမသူတို့၂ယောက်ကိုအပြစ်မပြောပါဘူး.. ဘာလို့လဲဆိုတော့..သူတို့ကတဆင့်သာသိတာ.. အစထဲကဒီလူကောင်းတယ်..မကောင်းဘူးလဲမပြောဘူး.. နင်ဒီလူ့ကိုခင်နော်...စကားပြောပါနော်လို့လဲ.. တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူး..ကျမဘာသာကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ယုံမိတာလေ.. ဒါပေမဲ့..ကျမပျော်ရွှင်နေနေ.. စိတ်ညစ်နေနေ..ကျမတွေ့ချင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ.. ကျမအနားမှာ သူတို့ရှိနေပေးတယ်..ကျမစိတ်ပြေလက်ပျောက်သူနဲ့ဆော့ကစားလို့ရသလို...စိတ်ညစ်တာတွေကို သူ့သူငယ်ချင်းကိုပြောပြဖြစ်တယ်... သူ့သူငယ်ချင်းက ကျမစိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်အောင် ကျမကိုရုပ်ရှင်တွေပြတယ်... အဖော်လုပ်ပေးတယ်... ပြီးတော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ နည်းပညာတချို့လဲပြောပြတယ်.. နောက်ပြီး.. ကျမ မသိသေးတဲ့ သူ့ကိုအသုံးချပြီးခိုင်းတဲ့နည်းတွေပြောပြတယ်.. သူ့သူငယ်ချင်းကတစ်ဆင့် သူ့အကြောင်းတွေကျမပိုသိလာရလေ သူ့ကိုပိုစိတ်ဝင်စားလေပဲ.. အရင်က သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့သာ သူနဲ့တွေ့နေရတာလေ.. ခုတော့ ကျမစိတ်ဝင်စားတဲ့ နည်းပညာတွေသူ့အကူအညီနဲ့ လုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတော့ သူ့ကိုပိုပိုပြီးသဘောကျလာတယ်..
အားလုံးထဲမှာ ကျမကငွေရှင်ကျေးရှင်ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းဆိုလဲဟုတ်.. အလုပ်ရှင်ဆိုလဲဟုတ်.. အရှင်သခင်ဆိုလဲကျမပဲလေ.. ကျမမှာငွေရှိနေသ၍တော့.. သူတို့ကျမကို ခွဲခွာသွားမှာမဟုတ်တဲ့ သစ္စာရှိလူယုံဆိုလဲဟုတ်တယ်.. သူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိလာတော့...
သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာမကြောက်တော့ဘူး..ခုဆိုကျမဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများကသူတို့၂ယောက်နဲ့ပဲကုန်လွန်နေပြီလေ.. ကျမသူတို့၂ယောက်ရဲ့အစွမ်းကိုသိလာလေ.. သူတို့၂ယောက်လုံးကိုပိုစိတ်ဝင်စားလာလေလေပဲ... ခုလဲကြည့်လေ..ကျမဒီပိုစ့်ကိုသူ့အကူအညီနဲ့ရေးနေပြီး... သူ့သူငယ်ချင်းအကူအညီနဲ့ ရှင်တို့ဖတ်လို့ရအောင်တင်ထားတာပေါ့.. ကျမရေးထားတဲ့အတိုင်း သူ့သူငယ်ချင်းက ရှင်တို့ကိုတသွေမတိမ်း... ပြန်ပြောပြနေပြီလေ.. အဲ သူတို့ကအမှားမခံတော့ ကျမအိမ်လိပ်စာ www.mabaydar.blogspot.com ဆိုတာလေးတော့ မမှားစေနဲ့ပေါ့နော်..ကျမဘဝမှာ ကျမမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာ အကြောက်ခဲ့ဆုံးကွန်ပြူတာဆိုတဲ့အရာက... ခုတော့ကျမရဲ့တနေ့တာတွေမှာ..အိပ်ချိန်ကလွဲလို့.. သူပဲနေရာယူနေပြီလေ...
အင်တာနက်ကလဲ.. ကျမမပျင်းရအောင်ကျမကိုဖျော်ဖြေနေဆဲပဲ..ကျမစိတ်ညစ်တိုင်း... စိတ်ရှုပ်တိုင်း... အထီးကျန်ဖြစ်တိုင်း...ကျမရဲ့အချိန်တွေကိုဒီကွန်ပြူတာနဲ့..အင်တာနက်သုံးရင်း..မေ့ပျောက်ခဲ့ရတာချည်းပဲလေ...ခုချိန်မှာတော့သူတို့၂ယောက်ကကျမဘဝအတွက် မရှိမဖြစ် အရာစာရင်းထဲမှာ.. နံပါတ်၁နေရာကဗိုလ်ဆွဲနေပြီလေ....
Posted by mabaydar at 2:30 AM 1 comment :
Labels: ၀တ္ထုတို , ဗေဒါ့အကြောင်း
Death Note မှာစုံထောက်မင်းသား L အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သွားတဲ့ မင်းသားရဲ့မူလမျက်နှာကို ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့စိတ်ဝင်စားခဲ့တာကြာပါပြီ..
အဲဒီကားကိုကြည့်တုန်းကလဲ အရမ်းကိုကြိုက်ရတဲ့မင်းသားပါ.. သူ့စတိုင်နဲ့အဲဒိကားထဲကသူ့ character ကိုကြိုက်တာပါ... ခါးကိုင်းကိုင်း ဆံပင်ပွပွ.. ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံကလဲကြောင်တောင်တောင်...
မျက်လုံးမှာလဲအမဲတွေဆိုးပြီး.. အချိုမုန့်တွေကြိုက်တတ်တဲ့.. အရမ်းဥာဏ်ကောင်းတဲ့ လူငယ်စုံထောက်တစ်ယောက်အဖြစ် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်သွားပြီး ပြိုင်ဘက်မင်းသား death note ပိုင်ရှင် Light ထက်တောင်စွဲဆောင်အားကောင်းခဲ့ပါတယ်.. ရုပ်ရည်အရ Light ကပိုသာတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပေမဲ့သူကသူ့စတိုင်နဲ့သာသွားပါတယ်.. ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတခြားကားတစ်ခုမှာတွေ့လိုက်ရတော့.. ကျမလုံးဝမမှတ်မိခဲ့ပါဘူး.. မိတ်ကပ် အပြင်အဆင် နဲ့ စတိုင်ရဲ့ အစွမ်းကတော်တော်လူကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်..
Death Note မကြည့်ရသေးသူများလဲ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်.. ကျမတောင်အစက ပေါကြောင်ကြောင်ကားမှတ်လို့မကြည့်ဖြစ်ပဲ..သူများတွေအပြောများလို့ ကြည့်ဖြစ်ပြီးကြိုက်သွားတာပါ.. စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပေမဲ့.. စုံထောက်ကားကောင်းတစ်ခုပါ...
Posted by mabaydar at 1:00 AM9comments :
Labels: General , ရုပ်ရှင်
My first work Of Editing on Youtube
This video is about my happiest time with my friends while i was attending YUFL.
This video is delegated to my friends who i met at UFL. I miss the old time so much. I am sure that same go to them.
Posted by mabaydar at 12:17 AM4comments :
သိရသလောက်...ဒီThe Asian Elephant Art & Conservation Project (AEACP)ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာပုဂ္ဂလိကအကြိုးအမျက်အတွက်မဟုတ်ပဲ..
နောက်ပြီး..ကံ့ကော်နဲ့စိန်ပန်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲမသိလို့ google မှာရှာရတာလဲအခက်တွေ့နေပါတယ်..သိရင်လဲကွန်မန့်မှာပြောသွားပေးပါနော်..
ဒါကတော့မူလ website က information ပါ..
Posted by mabaydar at 4:41 PM2comments :